Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Lisitry ny boky manome aingam-panahy ambony hanampy anao hitombo
Ny boky dia misy fahendrena mahery sy manova izay afaka manova ny làlan-kaleha amin'ny fiainanao manontolo. Izany dia mandeha amin'ny fahasalamana, harena, fifandraisana, ary ny zavatra hafa rehetra manandanja indrindra.
Raha te hitombo sy hivoatra isan'andro dia vakio fotsiny ny pejy 20 amin'ny boky lehibe iray! Mahatalanjona ny ROI.
Ireto misy boky ambony manome aingam-panahy hanampy anao hitombo.
Ary koa, misy toro-hevitra vitsivitsy hahazoana ny sandany indrindra amin'ny pejy rehetra atodinao.
Dosis ny antony manosika
Na dia ireo mpandraharaha fatra-paniry laza indrindra aza dia mahalala: ny antony manosika dia mandalo fotsiny, ary toa tsy azonao atao mihitsy ny mampivadi-po azy amin'ny fotoana mety. Rehefa mamaky pejy iray na roa amin'ny boky mandrisika ianao, dia mahazo an'io jolt mila manomboka io.
"Ny fahazarana 7 an'ny olona mahomby be avy amin'i Stephen R. Covey dia boky tsara manampy anao hahatsapa ho mamokatra sy manentana kokoa, "hoy izy Mary Berry, mpanorina ary CEO of Cosmos Vita. "Mampiditra fitaovana hahazoana vokatra tadiavina izy io ary manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fikarakarana izay mamokatra vokatra voalaza. Ankoatr'izay, mikasika ny singa fahaleovan-tena sy fifehezan-tena, fiankinan-doha ary fiaraha-miasa amin'ny hafa ary fanatsarana tsy tapaka. Ity boky ity dia hanampy anao hahafantatra ireo lafin-javatra sarobidy tokony hoheverinao eo am-pikatrohana ny tanjonao. ”
Fanentanana, fifehezana, fahazarana tsara - inona koa no ilainao hahomby?
Miaina ny mpampianatra lehibe indrindra amin'ny fiainana, fa ny boky mahafinaritra dia afaka manampy anao hahatakatra zavatra amin'ny sehatra lalindalina kokoa ary hanao zava-dehibe mamaky fotoana amin'ny fotoana lehibe.
"Essentialism: Ny fitadiavana fahombiazana voafehy manomboka amin'ny Greg McKeown dia manaparitaka ny zava-drehetra hatramin'ny zava-dehibe indrindra, "hoy izy Jared Pobre, CEO ary mpiara-manorina of Caldera + Lab. “Raha ny fitantanana ny fotoana no resahina dia tsy ny famoahana ny zava-drehetra izany. Ny fanaovana ny tsara no vita. Ny fisafidianana bebe kokoa ny toerana hampiasantsika ny herintsika dia ahafahantsika mifantoka amin'izay tena zava-dehibe. ”
Mianara amin'ny tena fiainana, fa ampiharo koa ny lesona avy amin'ny boky mba hampitomboana ny fahombiazana.
Rehefa mamaky boky ianao dia miditra ao an-tsaina sy ao an-tsain'ny sasany amin'ireo eritreritra lehibe indrindra eran-tany. Iza no afaka mandany fotoana toy izany amin'ny vidiny lafo toy izany?
"Jonathan Franzen dia iray amin'ireo mpanoratra velona velona," hoy izy Jorgen Vig Knudstorp, Filoha mpanatanteraka of Vondrona marika LEGO. “Ny bokiny farany dia fanangonana tsy foronina izay, ankoatry ny zavatra hafa, miady hevitra amin'ny famakiana sy fanoratana lahatsoratra, izay mifanohitra tanteraka amin'ny hafatra haingana, lahatsoratra amin'ny media sosialy, ary lohateny vaovao fohy.”
Anisan'ny maro i Franzen! Misafidiana mpanoratra tianao ary mandroba ny bibliografika iray manontolo mba tena hahazo ny sary feno.
Fanadihadiana amin'ny fahazarana
Impiry no tena mamakafaka ny zavatra ataontsika sy ny fitondrantenantsika manokana isika? Ny boky sasany dia mitaky antsika hijery akaiky ny fanaontsika ary hanao fanitsiana raha ilaina.
“Ny iray amin'ireo boky manentana ny fanahy indrindra novakiako dia Ny herin'ny fahazarana, maninona isika no manao izay ataontsika eo amin'ny fiainana sy ny asa aman-draharaha, nataon'i Charles Duhigg, "hoy izy Ashley Laffin, Talen'ny Senior Management of Brand Management at Reny maloto. “Boky goavambe izy io izay tena mety hahatonga anao hahatsapa ho mamokatra sy manome tanjaka kokoa amin'ny asanao. Ity boky ity dia manarona marindrano isan-karazany, manomboka amin'ny fanatanjahantena ka hatramin'ny orinasa lehibe DTC ka hatramin'ny fihetsehana ary mijery ny siansa ao ambadiky ny fahazarana. Izy io dia manadihady ny antony mahatonga ny olombelona ho fahazarana be ary koa manazava ny fomba mety hahafoana na hanovana ny fahazarana. ”
Ny andavanandrom-piainantsika dia ahitana fahazarana, mahasalama na amin'ny fomba hafa - raiso am-po ity boky ity!
Lesona amin'ny fanapahan-kevitra
Tsy ho be dia be ny fanehoan-kevitra tsara rehefa manomboka orinasa na mitady tanjona amin'ny fiainana, indrindra eo am-piandohana. Mitadiava boky manentana anao ary manome anao ny toe-tsaina ilaina hahomby.
“Tiako ny mamaky Makà gripa avy amin'i Gino Wickman sy Mike Paton, ”hoy izy Kiran Gollakota, mpiara-manorina of Waltham Clinic. “Midoboka amin'ny fomba fijanonana ho tapa-kevitra amin'ny maha mpitondra sy mpandraharaha azy rehefa sarotra ny mahita ny jiro any amin'ny faran'ny tionelina. Nampianatra ahy ny fomba hikororohana sy hitohizako io na dia toy ny tsy misy dikany aza izany. ”
Tsy isika rehetra akory no mandrisika amin'ny fomba fanoratra sy lohahevitra iray ihany, koa mitadiava boky manazava anao.
Vatosoa fanampiana tena
Misy boky an'arivony ao amin'ilay sokajy fanampiana ny tenany, izay maro amin'izy ireo dia mandrakotra hatrany hatrany hatrany ny resaka mitovy. Mitadiava diamondra ao anaty saritaka ary tazomy eo amin'ny talantalana misy anao, satria mety ho mahery vaika izy ireo.
“Ny boky fanampiana ny tenany dia nanjary tsena feno alahelo, tokony ho am-polony am-polony am-polony izy ireo, kanefa, tao anaty ranomasina misy atiny mpandraharaha voaverina sy manaitaitra, nahitako fahendrena sy fitarihana lehibe tao amin'i Jamie Schmidt's Supermaker, "Hoy izy Nik Sharma, tale jeneraly of Sharma Brands. "Schmidt dia manome banky fahalalana lehibe ho an'ny fitarihana ny fitomboan'ny orinasa, ny marika, ny fampandrosoana, ny karazana marketing, scaling, ny fifandraisan'ny mpanjifa ary ny PR. Izy io dia boky iray fanampiana manokana ny fivarotana iray, izay azoko natao tamin'ny fampiharana ny drafi-pandraharahako izay nanampy anay hiakatra haingana kokoa noho ny nantenainay. ”
Aza adino ny mampihatra izay nianaranao tamin'ny boky fanampiana ny tena, raha tsy izany dia famakiana amoron-dranomasina fotsiny izany.
Fahatakarana ny teknolojia vaovao
Nahoana araka ny eritreritrao ny CEO sy ny mpitarika indostria no mamaky boky vaovao foana? Izany no fomba hahafantaran'izy ireo momba ny fironana vaovao, ny haitao vaovao, ary ny zavatra hafa izay manome azy ireo ny lohalaharana amin'ny asa aman-draharaha.
"Hitako Architects of intelligence tena mahaliana sy fanazavana tsara momba ny AI - tena ilaina amin'ny tontolo mihetsika haingana sy miatrika fanontaniana ara-pitondrantena amin'ity faritra ity, "hoy izy Andrew Penn, Tale Jeneraly ary Tale mpitantana at Telstra.
Tsy mahaliana ihany ireo lohahevitra ireo, fa hanampy anao handresy amin'ny orinasa koa izy ireo.
Ny sain'ny olombelona angamba no lohahevitra mahaliana indrindra amin'ny rehetra, ary misy fomba maro tsy voatanisa hampiharana ny fikarohana ara-pahasalamana amin'ny lalao fandraharahana. Vakio ny momba ny psyk hahafantatra bebe kokoa ny tenanao sy ny hafa.
"Ny psikology Carol Dweck dia manohitra ny maha-zava-dehibe ny fananana fisainana mitombo ao amin'ny bokiny, Fomba fisainana: ny psikolojia momba ny fahombiazana, "Hoy izy Dr. Robert Applebaum, tompona of Applebaum MD. “Notsipihiny fa raha mbola maharitra isika dia hivoatra hatrany. Ao amin'ny Ny majika amin'ny fisainana lehibe, David J. Schwartz dia mitazona fa raha mbola mino ny tenantsika isika dia afaka mandresy izay tanjona azo eritreretina. Ireo boky roa ireo dia manadihady ny herin'ny saina sy ny habetsaky ny fifehezana antsika amin'ny valiny eo amin'ny fiainantsika. ”
Amin'ny fisainana maranitra sy ny toe-tsaina matanjaka kokoa, ahoana no hahavery anao?
Mpandraharaha maro no manomboka ny diany amin'ny tanjona matanjaka, saingy mety ho manjavozavo rehefa mandeha ny fotoana noho ny fihenjanana, havizanana ary fisalasalana ho an'ny tena. Mamaky boky izay manampy amin'ny fahitana indray izany tanjona izany ary mifikitra amin'ny drafitry ny lalao.
“Ao amin'i Simon Sinek Atombohy amin'ny Antony: Manentana ny rehetra handray andraikitra ny mpitondra lehibe, ny fahalalana ny tanjonao no mahatonga ny orinasanao hanaraka tsara hatrany mandra-pahatanteranao azy amin'ny farany, ”hoy izy Rym Selmi, mpanorina of MiiRO. “Raha tsy misy ny 'antony' hataonao dia tsy ho hitan'ny orinasanao ny antony misy azy io ary tsy hanana antony hividianana anao intsony ny mpanjifa. Ny psikology Angela Duckworth dia miady hevitra ao amin'ny bokiny, Grit: ny herin'ny filana sy fikirizana, fa ny fihazonana tsy fitoviana mandritra ny fotoana maharitra dia hahatonga anao hahatratra ny tanjonao amin'ny farany. Ireo boky ireo dia manome fahitana lehibe momba ny maha-zava-dehibe ny fijanonana hifantoka amin'ny tanjonao. ”
Tsy misy boky hampahafantatra anao ny tanjonao aminao, mazava ho azy. Aminao izany!
Classics momba ny orinasa
Tsy mila mpivarotra ianao vao mahita sanda amin'ny kilasika amin'ny karazany. Ireo lohahevitra toa ny harena sy ny fitantanana ny fifandraisana dia iraisan'ny rehetra, koa manomboha mamaky ireo tianao amin'ny sekoly taloha.
“Betsaka ny boky izay nanome aingam-panahy ahy nandritra ny taona maro, sarotra ny manonona vitsivitsy fotsiny,” hoy izy Aidan Cole, mpiara-manorina of TatBrow. "Amin'ny maha tompona orinasa anao, Ratsy Dada Ratsy Dada novakin'i Robert Kiyosaki dia novakiana tsara. Ny boky dia miresaka momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny trosa sy ny fananana, mazava ho azy fa fananana mihoatra ny trosa no tadiavinao. Ary miresaka momba ny maha samy hafa ny maha mpiasa, miasa tena, tompona orinasa ary mpampiasa vola. Boky mahafinaritra iray hafa koa Ahoana no hahazoana namana sy fanamafisana ny olona avy amin'i Dale Carnegie. Ity dia boky tsara mandritra ny fiainana, mampianatra anao zavatra toa ny fahalianana amin'ny olona izy io mba hahafahanao hanana fifandraisana maharitra! ”
Ireo no karazana boky izay manome fotsiny sy mendrika ny famakiana marobe. Aza avela handao ny talantalana mihitsy izy ireo.
Fitomboana sy fitomboana
Ny boky dia miasa tsara amin'ny fanazavana ny hevitra sarotra, nefa manolotra fomba fijery manazava ihany koa momba ny hevitra tsotra hahazoana valiny lehibe. Izany no majika amin'ny teny.
"Araka ny filazan'ny psikology Angela Duckworth, ny lakilen'ny fahombiazana dia miankina amin'ny grit," hoy izy Carrie Derocher, CMO of TextSanity. “Ny bokiny, Grit: ny herin'ny filana sy fikirizana, manamafy fa raha mbola maharitra tsy tapaka ianao dia hahatratra ny tanjonao amin'ny farany. Ao amin'ny boky mandrisika azy, Fomba fisainana: ny psikolojia momba ny fahombiazana, Carol S. Dweck dia mifantoka amin'ny hevitra fa ny fananana toe-tsaina fitomboana dia handrisika ny ezaka ataontsika hanohy hivoatra. ”
Afaka mahita dikany, antony manosika ianao ary maro hafa amin'ny boky mahafinaritra. Inona no andrasanao?
Soso-kevitra momba ny asa lavitra
Ny boky sasany dia mamaky bebe kokoa toy ny boky torolàlana na blueprint mba hahatratrarana vokatra iray. Mety fanovana hafainganam-pandeha ity avy amin'izay tianao hovakiana amin'ny fotoana malalaka anananao, saingy mety ho miavaka ny valiny.
“Navoaka vao Fiteny momba ny vatan'ny nomerika: Ahoana ny fananganana fahatokisana sy fifandraisana, na inona na inona elanelana avy amin'i Erica Dhawan dia mandinika ny fitenin'ny vatana eo amin'ny tontolon'ny nomerika, ”hoy izy Tyler Forte, mpanorina ary CEO of Felix Homes. “Ankehitriny, biraon'ny maro no nifindra tao anaty tontolo ivoho, ny fifandraisana mahomby dia tsy nisy fanakianana intsony. Ary amin'ny fitomboan'ny fivoriana virtoaly, ny fianarana mandika fitondran-tena dia hanampy anao hifandray tsara kokoa sy handrisika ny mpiasanao. ”
Misy lanjany foana ny fianarana fahaiza-manao vaovao, ary ny boky dia afaka hanafainganana an'ity dingana ity folo heny.
Raha mahatsiaro mijanona tsy miandany na mila fanombohana eo amin'ny fiainana fotsiny ianao dia tonga ny fotoana hamakiana boky manentana fanahy. Mila pejy vitsivitsy fotsiny ianao vao mahazo fomba fijery tena ilaina ary mety hanana fanambarana kely na roa aza.
"Ny fisainana fitomboana nataon'i Joshua Moore sy Helen Glasgow dia mizaha amin'ny fomba hikarohan-tena hikaroka fitomboana, "hoy izy Eric Gist, mpiara-manorina of OS mahatalanjona. “Misy foana ny toerana fitomboana, ary tsy mitsahatra mitombo izahay. Nampiseho tamiko ny fomba hikarohana fotoana vaovao ary hanohizako hianatra amin'ny asako. ”
Indraindray, ny teny mety dia afaka manampy anao hiala amin'ny fahalavoana ary hiakatra amin'ny fotoana mety.
Tantara manentana ny fanahy
Tsy misy zavatra manentana kokoa noho ny mamaky momba ny tena olona sy ny zava-bitan'izy ireo amin'ny zava-baovao sy ny zava-bita. Tsy mampihetsi-po fotsiny izany, fa mampiseho kosa fa afaka manao toy izany koa ianao.
"Fitaovana Titans: Ny tetika, fanazaran-tena ary fahazaran'ireo miliardera, sary masina ary mpanao an'izao tontolo izao dia fitambaran-tantara mampihetsi-po avy amin'ny podcaster malaza Tim Ferriss, ”hoy izy Joshua Tatum, mpiara-manorina of Kolontsaina Canvas. “Ireo tantara ireo dia maneho ny tsara, ny ratsy, ary ny ratsy indrindra amin'ny fiainan'ireo miliardera, sary masina ary angano, manome sarintany misy ny làlana mankany amin'ny fahombiazana. Mahasarika sy mitaona aingam-panahy dia te hizara ireo tantara ireo amin'ny ekipa iray manontolo ianao. ”
Ianaro ny fomba nanaovan'izy ireo izany, hanarahana ny dian'izy ireo, ary hamela an'izao tontolo izao ny marikao.
Fahombiazana na eo aza ny tsy fahazoana antoka
Resaka tena izy - manana fisalasalana samirery isika rehetra indraindray. Amin'ny fotoan-tsarotra dia afaka mandray soa avy amin'ny boky mitazona antsika tsy hiorina tsara sy hameno ny fahatokisantsika antsika isika. Tsara kokoa noho izany ny fomba mikatona ny vaovao amin'ny tariby!
“Ny fianarana mamantatra sy manararaotra fotoana mety mandritra ny korontana no ifantohan'ny Mamorona ny ho avy + ny Boky Torolàlana Fanavaozana: Tetika amin'ny fisainana mikorontana avy amin'i Jeremy Gutsche, ”hoy izy Shahzil Amin, mpiara-miasa mitantana ao amin'ny Karlani Capital ary mpanorina ny Emagineer ary WellBefore. “COVID-19 dia nanova ny fomba fanaovana asa aman-draharaha. Nandritra ny areti-mandringana dia orinasa maro no tsy nahomby noho ny tsy fahampian'ny fahiratan-tsaina sy ny fitoviana. Ny hafa kosa nandroso tamin'ny fampiasana eritreritra manakorontana mba hamantarana ny fiovan'ny filan'ny mpanjifa ary mivoatra haingana hitsena azy ireo. Ity dia famakiana aorian'ny areti-mandringana ho an'ny orinasa mandroso. "
Aza variana miambina amin'ny zava-mitranga eran-tany. Miomàna amin'ny alàlan'ny famakiana ireo boky mety sy fampiasa saina.
Ny fifandraisantsika amin'ny olon-kafa dia zava-dehibe tokoa amin'ny fiainana sambatra sy mahomby. Misy boky mahazatra sasany izay manampy antsika hanangana sy hitantana ny fifandraisana amin'ny fomba mahomby kokoa, koa aza hadino ny fotoana hamakiana azy ireo mialoha.
“Raha tianao ny olona ho tia anao dia aza mitsikera azy intsony, Dale Carnegie dia mitory ao amin'ny bokiny malaza, Ahoana no hahazoana namana sy fanamafisana ny olona, "Hoy izy Michael Scanlon, CMO ary mpiara-manorina of Roo Skincare. “Tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fifandraisana manokana sy ny fifandraisana amin'ny orinasa. Raha ny kanto serasera no resahina dia samy manana ny fotokevitra iorenan'izy ireo. Boky manaitra iray hafa koa i David J. Schwartz ', Ny majika amin'ny fisainana lehibe, izay manolotra fomba mahasoa amin'ny fampiofanana ny tenanao hieritreritra sy hitondra tena amin'ny fomba hahatratrarana ny fanirianao rehetra. ”
Azo antoka fa afaka mijery horonantsary ianao na mamaky teny nalaina, fa tsy misy maharesy ny zavatra niainan'ny boky tena izy.
Fahazarana sy fahazarana
Mpamorona fahazarana daholo isika. Ny fanontaniana mipetraka dia - inona ny fahazarana manampy anao hahomby, ary iza amin'ireo no misakana anao tsy haninona?
"Ny boky tsara indrindra vakin'ny mpitondra dia"Fahazarana 7 olona mahomby be”” Hoy Jason Wong, CEO of Doe Lashes. “Ity boky ity dia milentika amin'ny famoronana fahazarana tsara indrindra hahombiazanao eo amin'izao tontolo izao ary mamaky azy io ho singa mora levona. Tena amporisihiko amin'ny rehetra izany. ”
Araka ny voalazan'i Socrates, ny fiainana tsy dinihina dia tsy mendrika hiainana, koa manomboha mamaky ary mahita bebe kokoa momba anao sy ny fomba fivezivezanao manerana an'izao tontolo izao.
Boky Torolàlana manampy
Ny boky iray dia tsy mila lahatsoratra misy pejy iray arivo hahomby sy ilaina. Ny sasany amin'ireo boky ankafizinay dia tsotra sy mora vakiana amin'ny hafatra mazava sy manerantany.
"Paul Arden's"Tsy tsara ny hatsaranao, fa tsara toa izao ianao: Boky lafo indrindra eran-tany ” torolàlana am-paosy momba ny fomba hahombiazanao dia manolotra quips haingana sy sombim-pahendrena azonao ampiasaina amin'ny asa aman-draharaha sy ny fiainanao manokana, ” hoy ny Dr. Zachary Okhah, mpanorina sy Lehiben'ny mpandidy at PH-1 Miami. “Miaraka amin'ny kanto, sary ary sary mahafinaritra, feno fahasarotana io. Tsy tsara izany manarona ny zava-drehetra manomboka amin'ny hevitra adaladala manampy anao handresy ny sakana ara-tsaina ka hatramin'ny fandroahana mety ho zavatra tsara. Boky mora ampiasaina amin'ny pejy rehefa mila fahitana aingam-panahy kely ianao. ”
Satria lava sy lava ny boky iray, dia tsy midika izany hoe tsara be foana! Indraindray ianao dia te hihazona azy tsotra fotsiny.
Rehefa mahita fahendrena feno fahendrena ao amin'ny pejin'ny boky lehibe ianao, dia mijanona miaraka aminao mandrakizay izany, ary tsy misy olona afaka maka azy. Fanampin'izay, arakaraka ny hamenoan'ny fahendrenao no mahaizanao tsara kokoa hiatrika ireo fanamby mafy indrindra amin'ny fiainana.
"In Ahoana no hahazoana namana sy fanamafisana ny olona, iray amin'ireo boky be mpividy indrindra, Dale Carnegie dia nanolo-kevitra ny tsy hijery ny masontsika ary haneho fahalianana amin'ny hafa raha te-ho tian'ny olona isika, ”hoy i Haim Medine, mpiara-manorina ary talen'ny famoronana at Mark Henry firavaka. “Ity torohevitra ity dia tsy mifandraika amin'ny fifandraisana manokana fotsiny, fa koa manampy amin'ny fambolena fifandraisana matihanina. 'Raha mino an'izany isika dia afaka mahatratra azy', hoy ny hafatra nentanim-panahy nataon'i David J. Schwartz tao amin'ny bokiny manan-kery, Ny majika amin'ny fisainana lehibe. Afaka manana izany faniriana rehetra izany amin'ny fiainantsika isika amin'ny alàlan'ny fanamafisana izay manamafy ireo finoana ireo. ”
Miaraka amin'ny tolo-kevitry ny boky mihoatra ny ampolony avy amin'ny mpitarika orinasa lehibe dia manana anton-javatra betsaka ianao handaminana azy. Fenoy ny mpamaky e-nao na makà paperbacks - na inona na inona ataonao, aza mitsahatra mamaky!